Muxuu Yahay Heshiiska Taariikhiga Ah Ee Lagu Gaaray Garoowe? - Caasima...
Muxuu yahay heshiiska taariikhiga ah ee lagu gaaray Garoowe? – Caasima…
Garoowe (Wararka Maanta) – Dowladda dhexe ee federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo shir maamlmo qaatay ku yeeshay magaalado Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo ku aadan waxbarashada.
Shirka ka dhacay Garoowe ayaa wuxuu u dhexeeya wasiirada waxbarashada ee dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo sidoo kale xubno ka socda gobolka Banaadir, waxaana lagu faray arrimaha waxbarashada, shahaadiyoonka iyo imtixaanaadka.
Sidoo kale shirkan ayaa waxa lagu gaaray is afargad ay dhinacyadu wada saxiixeen oo lagu horumarinayi waxbarashada, iyadoo gabagabadee laga soo saaray war-murtiyeed.
Wararka Maanta : Maxaa u qabsoomay guddiga loo xil-saaray arrinta GEDO? - Caasimada Onl...
Qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah In la aas aaso Golaha Iskaashiga iyo Wadatashiga Wasaaradaha Waxbarashada, nn la mideeyo qalfoofta manhajka (Curriculum Framework), loona saaro guddi farsamo midaynta Qalfoofka Manhajka( Curriculum Framework).
Sidoo kale waxay dowlad federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir isku af-garteen in maamul goboleed walba si madax banaan u maamusho imtixaankiisa, lana sameeyo guddi madax banaan oo sameeya halbeegyada Guud.
War-murtiyeedka ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in shahaadooyinka laga qaato lagana bixiyo maamul goboleed walba loona daabacan karo hab online ah.
Heshiiskan cusub ayaa ah mid meesha ka saarayo khilaafaad hore uga jiray dhinaca imtixaanaadka oo u dhexeeyey dowladda dhexe & qaar ka mida maamul goboleedyada.
Wararka Maanta : Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay mukhaadaraadka oo Somaliland kuso...
KENYA oo shaacisay inay duqeyn ku dishay xubno Shabaab ah – Caasimada …
Jubbaland oo xukun dil ah ku fulisay nin kufsaday gabadh saddex jir oo…
Wararka Maanta : Farmaajo oo ka hadlay guusha Abiy ee doorashada Itoobiya - Radio...
Wararka Maanta : Jubbaland oo war cusub kasoo saartay doorashada Golaha Aqalka Sare - C...
Wararka Maanta : Xog: La-taliyaha Farmaajo CABDI CALI RAAGE oo laga celiyay garoonka Ki...
Wararka Maanta : Xog: Beel Cali Guudlaawe ka hor-istaagtay shir lagu qabtay magaalada C...
Wararka Maanta : Daawo: Taliska Booliska oo soo bandhigay sagaal kamid ah ragii ku daga...
Wararka Maanta : Daawo R/W Rooble: NISA iyo booliska uma dulqaadan doono in dad safraya...
Wararka Maanta : Guddoomiyihii hore gobolka Gedo oo sheegay in mar kale laga celiyay...
Wararka Somali15 mins ago
Wararka Videos14 hours ago
Caalamka Videos17 hours ago
Wararka Videos20 hours ago
Wararka Videos5 days ago
Deg Deg: Fariinta MD Farmaajo & RW Rooble iyo Kiiska Ikran oo weji kale…